Daty famoahana Genshin Impact - rahoviana no ho hita ao amin'ny Nintendo Switch? | la-manette.com
Ireto ny zavatra rehetra fantatray Fomba Genshin amin'ny Switch
Tsy mila manontany tena intsony ianao hoe rahoviana ny daty famotsorana an'i Genshin Impact, satria ny Breath of the Wild-style RPG dia mivoaka amin'ny iOS, Android,PS4 ary PC. Miaraka amin'ny tabataba manodidina an'ity RPG co-op ity dia mihamitombo, ny mpilalao Switch dia mety hahatsapa kely. Izany hoe, Genshin Impact dia mbola eo am-piasana ho an'ny console Nintendo.
Mazava ho azy fa ny Switch dia efa manana Breath of the Wild, fa Genshin Impact dia manana hevitra maro ho azy manokana. Ho fanampin'ny endrika mihetsiketsika amin'ireo mpilalao, ny ady dia mifantoka kokoa amin'ny hack-and-slash. Tsy dia mahagaga loatra ho an'ireo izay nilalao ny lalao farany an'ny developer Mihoyo, Honkai Impact 3rd. Betsaka koa ny tanàn-dehibe hojerena sy honenana rehefa tsy mikaroka sy mamely ireo olon-dratsy amin'ny sabatrao ianao. Tontolo Breath of the Wild mivelatra sy tsara tarehy, miaraka amin'ny karazana ady totohondry bokotra, mora amidy, saingy misy zavatra betsaka kokoa noho ny eritreretinao.
Ankehitriny Genshin Impact dia misy amin'ny iOS, Android, PS4 ary PC, ny fanontaniana dia mipoitra amin'ny famoahana azy amin'ny Switch. Noho izany dia ampianay eto izay fampahalalana mifandraika amin'ny daty famoahana ny Genshin Impact amin'ny Nintendo Switch. Maharaha vaovao.
GENSHIN IMPACT SWITCH DATY FELETE:
Ny Genshin Impact dia ho hita ao amin'ny Nintendo Switch, fa ny developer Mihoyo dia mbola tsy nanambara daty famoahana manokana. Ny seranan-tsambo Switch dia nambara ela be talohan'ny nanombohan'ny fivoaran'ny lalao, izany no antony tsy navoakany niaraka tamin'ny dikan-teny iOS, Android, PS4 ary PC.
Vakio ihany koa: Ny fampiharana fianarana fiteny 8 tsara indrindra izay tena miasa
AIZA NO AZO HANAO PIREVIEW NY GENSHIN IMPACT GAMEPLAY?
Eo am-piandrasana ny kinova Switch, maninona raha mijery ny tranofiara Genshin Impact farany? Izy io dia manasongadina sary milamina izay tsy ho hita ao amin'ny lalao Zelda. Azonao atao ihany koa ny mahita ny sasany amin'ireo tanàna hidiranao mandritra ny fampielezan-kevitra, ary koa ny sasany amin'ireo fahavalo izay hatrehinao eny an-dalana.
AHOANA NO HAHAZO NY GENSHIN IMPACT?
Genshin Impact dia azo alaina ao downloading maimaim-poana amin'ny App Store sy Google Play. Afaka mahazo izany maimaimpoana ireo mpilalao PC amin'ny alalan'ny eto. Ary raha mbola tsy resy lahatra ianao dia manoro hevitra anao izahay mba hijery ny anay Fitsapana Genshin Impact ary ny antsika Genshin Impact lisitra.
Afaka mijery Netflix amin'ny Switch ve isika?
Ny Nintendo Switch OLED: Vidiny, Daty Famoahana, Specs, Vaovao ary Lalao.
Ny OLED Switch vaovao dia manana izany rehetra izany
Moa ve ny Switch Pro hamokatra tsipika ambany mitovy amin'ny PS5 sy Xbox Series X?
Ity ny fomba fampifandraisana headset na mpanara-maso vaovao amin'ny Nintendo Switch amin'ny alàlan'ny Bluetooth.
Ahoana ny fametrahana Mods amin'ny Minecraft amin'ny PC, Switch, Xbox, Android ary iPhone
Vakio ihany koa: 9 fampiharana maimaim-poana tsara indrindra amin'ny fandefasana sarimihetsika
Ahoana ny fomba hack ny kaonty Roblox